प्रेमपत्र लेख्दा बिकासलाई रौतहटमा यस्तोसम्म गरियो (भिडियो हेर्नुहोस्) – Sidha Kura
काठमाडौंमा श्रीमान श्रीमती मृत अवस्थामा फेला परे
गर्भवती श्रीमतीलाई एकैछिनमा आउँछु भनेर फोन काटेका शोभाखर घर फर्किन पाएनन्, जसलाई बाटोमै नालीले निल्यो !
ओमिक्रोन भेरियन्ट बारे जापानले पत्ता लगायो नयाँ तथ्य
‘पुष्पा’ फिल्मको दृश्य वास्तविकतामै देखियो, ५८ जना पक्राउ
मोरङको उंखुबारीमा मृत भेटिए धरान घर भै भक्तपुरमा बस्ने श्रेष्ठ (भिडियो सहित)
‘से’क्स स्प’ट’ का कारण कुरूप बनेको एउटा टापुको यस्तो छ भित्रि कथा
महिला प्रहरीको डीएसपीसँग अ’वै’ध स’म्ब’न्ध, मोबाइलमा भेटियो यस्तो अ’श्ली’ल भिडियो, हेर्नुहोस
एकाबिहानै बैतडीमा बिहानै बस दुर्घटना, सडकबाट ५ मिटर तल खस्यो बस
यिनै हुन् आफ्नै घरमा मृत भेटिए राज्यमन्त्रीका पिएसओ
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रेमपत्र लेख्दा बिकासलाई रौतहटमा यस्तोसम्म गरियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रेमपत्र लेख्दा बिकासलाई रौतहटमा यस्तोसम्म गरियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
417 1 minute read
प्रेमले जात धर्म समाज हेर्दैन भनिन्छ । अझ नेपालमा प्रेमका नाममा नराम्रो ब्यवहार गरेमा कानुनी कारवाही समेत हुने गरेको छ । तर धेरैले प्रेमका नाममा हुने यस्ता घटना भोग्नु परिरहेको छ । यस्तै एक घटना रौतहटमा भएको छ । त्यहाँ दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ का १८ वर्षीय युवकले युवतीलाई प्रेमपत्र लेखेको भन्दै उनीमाथि नि र्घा त कु ट पि ट गरिएको छ ।****यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लि,क गर्नुहोस ****
बिकास अहिले कक्षा ११ मा पढिरहेका छन् । उनलाई यस्तो आरोप लगाएर गाउँकै केही युवाले यस्तो गरेका हुन् । स्थानमा एक दर्जन बढी मानिस जम्मा रहेको तस्बिरमा देखिन्छ । बिकासले आफूले गल्ती नगरेको भन्दै याचना गरिरहेको दृश्य देखिन्छ । एकजनाले कु ट पि ट गरिरहेको र अन्य व्यक्ति हेरेर बसेको तस्बिरमा देखिन्छ ।
दुर्गाभगवती–५ का वडाध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले ती युवकले स्थानीय एक युवतीलाई प्रेमपत्र लेखेपछि कु ट पि ट भएको आफूले सुनेको बताए । घटना बिहीबारको हो । शुक्रवार घटना सार्वजनिक भएको छ । वडाध्यक्ष चौधरीले घटनामा संलग्न दुबै पक्षलाई प्रहरीले बोलाएको जानकारी आफूले पाएको समेत बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले कु ट पि ट बारे दिउँसोसम्म उजूरी नपरेको बताएका छन् । कु टा इ खाएका युवकको स्वास्थ्य जाँच भएको छ । जाहेरी आएपछि थप अनुसन्धान हुन्छ, एसपी शाहले भने ।
वडाध्यक्षले भने, केटीलाई चिठीसिठी पठायो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, खास कुरा के हो मलाई पनि थाहा छैन, ब्यस्त भएकाले राम्रोसँग बुझ्न पाएको छैन भनेका छन् । भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले पनि घटनाबारे जानकारी पाएको छ । वडाध्यक्ष चौधरीले घटनामा संलग्न दुबै पक्षलाई प्रहरीले बोलाएको भनेका छन् ।
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
आज भाइटीका : उत्तम साइत ११:३७ बजे, कता फर्केर लगाउने?
काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरामा जमिनमुनीबाट ग्यास निस्कियो
यसरी निकालियो कुखुराको सुलीबाट बिजुली ! ६२ केभिएको जेनेरेटर
झापाकी १८ वर्षीया अन्सु शिवाकोटीको यसरि भयो कलिलै उमेरमा दु:खद मृत्यु